Shirweynaha Garabka Haweenka Waddani Oo Furmay+ Khudbad Gudoomiye Cirro Ka Jeediyay Oo Uu Kaga Hadlay Odhaahdii Madaxweynuhu Doorashada Ka yidhi, Xaaladda Yemen iyo Arrimo Kale | Duul News International
Shirweynaha Garabka Haweenka Waddani Oo Furmay+ Khudbad Gudoomiye Cirro Ka Jeediyay Oo Uu Kaga Hadlay Odhaahdii Madaxweynuhu Doorashada Ka yidhi, Xaaladda Yemen iyo Arrimo Kale	(Duulnews)-Shirweynaha garabka haweenka Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani, ayaa galinkii hore ee Axadda si rasmi ah uga furmay Hotelka Maansoor ee Magaalada Hargeysa. Shirweynahan oo noqonaya kii 1-aad waxaa ka qayb galay Hogaanka Xisbiga
Waddani, Xildhibaano, Ergooyinka Haweenka ah iyo dadweyne kale.
Ergooyinka Shirkan ayaa ka kala socda Gobolada Somaliland eek ala ah Maroodi-jeex, Togdheer, Boorama, Sool, Sanaag, Buuhoodle, Gabilay, Hawd iyo gobolka Xaysimo, waxaana lagu dooran doonaa hogaanka Garabka Haweenka ee Qaran ee Waddani.
Gudoomiyaha Xisbiga Waddani iyo Golaha wakiiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi(Cirro), ayaa ugu horayn ku dhawaaqay furitaanka Shirka “Waxan ku dhawaaqayaa Furitaanka Shirka koowaad ee Garabka haweenka heer Qaran ee Xisbiga WADANI inuu maanta oo Axad ah 29 March 2015 Ka furmay Huteel maansoor ee Caasimada Jamuuriyada Somaliland”, ayuu yidhi Gudoomiye Cirro.
Gudoomiye Cirro, ayaa sidoo kale halkaasi ka jeediyay Khudbad waxaanay u dhignay sidan:-
Mahad-naq Waxaan mahad naq u soo Jeedinayaa Gudida Qaban qaabada ee shirka koowaad eeHeer qaran ee xisbiga Shacbiga oo wakhti badan tacab badan iyo Dadaal badan Ugalay qabsoomidda Shirkan balaadhan ee muhiimka ah si farashaxan iyo hal-abuurka leh, waxaanu leenayahay Haween iyo Ragba.
Xisbiga Waddani waxaa uu u taagan yahay sugitaanka xuquuqda qaybaha bulshada dulman, isaga oo tixgalin dheeraad ah siinaya haweenka, dhalinyarada iyo qaybaha kale ee bulshada.
Xisbiga Waddani waxa ka reeban waxii wax u dhimaaya midnimada dalka, dhamaansha dhul ahaaneed ee jamhuuriyada Somaliland iyo nabad galyada guud.
Xisbiga Waddani waxaa uu u taagan yahay ku-dhaqanka qaynuunka, cadaalada, sinaanshaha, xoriyada iyo wadaniyada.
Xisbiga Waddani waxaa uu u taagan yahay dheeli tirnaanta horumarka gobalada iyo u-sinaanta muwaadiniinta ee khayraadka dalka.
Xisbiga Waddani, waxaa uu taabo galinayaa in uu taageerayaashiisa baro tartanka doorashooyinka xorta ah iyo ku dhaqanka habka dimuqraadiyada.
Waxaa ka soo baxay komishanka doorashooyinka qaranka hindise ay ka muuqato in doorashooyinku ay wakhtigoodii dhaafayaan.
Hawlaha naga’ga aadanaa doorashooyinka waan fuliyey.
Waxaa muuqata in dib-u-dhac jiro waxaan leeyahay. “Nin reer u wayni sida uu wax u ogyahay uma wada sheego, cida eeda yeelataa way soo bixi doonta.”.
Dhamaan dhinacyada ay arrintani khusayso oo dhami (Mucaarad iyo Muxaafad), waxaan u soo jeedinayaa in aynu wada-tashi iyo walaaltinimo aynu ku dhamaysanayno arrimaheena innaga oo sharcig ixtiraamayna.
Daawo: Siyaasiga Cismaan Hindi Oo Ka Hadlay Khilaafka Siyaasadeed Ee Dalka Ka ALoosan
Guddoomiye Cabdiraxmaan Ciro Oo Furay Tartanka Koobka Ciyaaraha Bisha Ramadaan Ee Garoonka Xawaadle+Agab Ciyaareedna Guddoonsiiyey Afar Kooxood Oo Ku Ciyaaraya Garoonkaas.
Labada Xisbi Mucaarad Oo Gudoomiyaha Guurtida U Gudbiyay Mawqifkooda Muddo Kordhinta